Fariinta Dowlada ee ku saabsan Haramaha Gobolka waa Musalaf • Dawooyinka Inc.eu
1 Saamaynta nudaha
2 Goobta Xashiishka Gobolka
Tijaabada qaabeynta qaabeynta naqshadeynta qaxweedka waxaa loo daabacay 30 Sebtember. Sharcigani wuxuu bixinayaa sharraxaad dheeri ah oo ku saabsan tijaabada haramaha wuxuuna ka kooban yahay xeerar ku saabsan xulashada beeraleyda, baakadaha iyo tayada hemp ama xashiisha iyo maamulka la sameyn doono. Qorshahan ayaa la soo galiyay latalinta internetka iyo illaa Noofembar 12 qof walbaa wuu ka jawaabi karaa qorshaha qabyada ah.
Mid ka mid ah qodobada ugu badan ee looga hadlay xeerka ayaa ah marinka ah in “baakadaha laga hor istaago inay ku sawiraan dadka aan ku talo jirin inay isticmaalaan hemp ama xashiish. Sababtaas awgeed, calaamadda sidoo kale waa inaysan sheegin saameynta la doonayo ee isticmaalka sheyga. ”
In warbaahinta kala duwan fiiro gaar ah ayaa loo bixiyay cutubkan iyo jiritaankiisa safka Volkskrant ha Teun van de Keuken wax sabab ah malahan sababtan darteed.
Dawladdu maxay qabtaa? In dadka aan jeclayn xashiishadda ay si lama filaan ah ugu soo galaan meherad laga qaxweeyo oo gobolka ku taal, oo ay naftooda u soo jiidaan xirmo isla markaana ay si iskiis ah u caadeystaan ​​cabidda sigaarka?
Wuxuu si faahfaahsan u muujiyey farqiga u dhexeeya ugaarsiga wax ku oolka ah (warshadaha cuntada) iyo u ololeyn aan yarayn (oo ka socota qaybta xashiishadda).
Baakadaha cunnada aan caafimaadka qabin, oo ka waxyeelo badan caafimaadka bulshada marka loo eego xashiishadda, ayaa hadda lagu sameyn karaa dhowr sheegasho xayeysiis ah oo madhan. Waa inaanan taas badalin, maxaa yeelay macaamiisha waxay leeyihiin masuuliyad iyaga u gaar ah waxayna hubaal ka jari doonaan weedho godan. Marka ay timaado daroogada, isla macaamilka ayaa si lama filaan ah u ah dhibbane aan rabin oo lagu dhejin karo baakad wanaagsan.
Goobta Xashiishka Gobolka
Waxyaabaha aad looga walwalo ee kahadalnaa xiritaanka haramaha ee gobolka ayaa ah hadal ka soo yeeray afhayeenka Wasaaradda Caafimaadka, Daryeelka iyo Cayaaraha. Marar dhif ah ayaa noqday ganacsiga xashiishadda gobolka (Ereyga ra'yigeyga laga yaabo inuu noqdo erayga sanadka 2019) eray ka fiican.
“Looguma talagalin in la dhaho, fiiri, weed dawladeed ayaa fiican, markaa qiiji. Tijaabadu waxay si cad ugu saabsan tahay fulinta iyo dembiga, laakiin dabcan waxaan sidoo kale dejinay shuruudaha tayada, caafimaadka iyo macluumaadka. Waxaan door bidnay in dadku aysan isticmaalin haba yaraatee. ”
Markaa waxaa jiri doona tijaabo cannabis oo ay soo saartaan beeraleyda u qoondaysan Gobolka. Beeraleydaasi waxay dhowaan soo saari doonaan xashiishad shuruudo adag. Tayada cannabis sharci ahaan koray waa la hubiyay. Waxyaabaha ka kooban maandooriyaasha firfircoon waxaa lagu caddeeyey baakadka (cad, caajis, aan dan ka lahayn) baakadka. Xaalad habboon, waxay ila tahay, dhab ahaan marka la barbardhigo xaaladda hadda jirta. Dhawaan qof kasta ayaa ogaan doona waxa uu sigaar cabayo, halka uu ka yimid iyo waxa ku jira. Laakiin taasi maahan ujeeddadii. Ujeeddadu waa in qofna iibsan.
Uma saari karo sidan sinaba marka loo eego farriinta ah in waaxda dambiyada waa in la joojiyaa oo tijaabintuna ay tahay inay gacan ka geysato ilaalinta caafimaadka dadweynaha. Maxay dawladu rabtaa? Taasi cidna ma oga nooc kaftan ah wuxuu sigaar cabayaa oo qof walbaa wuxuu sii wadaa inuu ka iibsado haramaha mulkiilaha guryaha maxalliga ah ama kafee makhaayadaha lagu qasbo inay ka iibsadaan xashiishadda ganacsatada sharci darrada ah, kuwaas oo iyagu maalgashanaya lacagta ay ku kasbadaan waxyaabo kale, sida tahriibinta dadka, ganacsiga hubka, daroogada adag iyo dhilleysiga?
Iyo in la hubiyo in natiijooyinka cilmi-baarista la hagaajin karo haddii loo baahdo (maxaa yeelay qiyaasa in tijaabadu ay noqon doonto mid guuleysata, in kasta oo dadaallada dowladda oo dhan ay jiraan), Xarunta Cilmi baarista Sayniska iyo Dukumiintiyada ayaa si fiican loo yaqaan. sida WODC, loo magacaabay awood kaasoo kormeeri doona baaritaanka. WODC ayaa wali ka doodi jirtay 2018 ka dib markii Nieuwsuur uu muujiyey in ay jirto saameyn aan loo baahneyn oo ka timid Wasaaradda Caddaaladda iyo Amniga. Warbixinno dhowr ah oo ka socda WODC oo ku saabsan siyaasadda daroogada jilicsan ayaa lagu hagaajiyay cadaadiska saraakiisha siyaasadda, labadaba su'aalaha iyo nuxurka.
Su'aalaha cilmi-baarista, sida loo sameeyay, waxaa lala wadaagay Golaha. Baarayaasha kormeeraya oo qiimeynaya tijaabada ayaa la weydiin doonaa inay ku daraan fikradaha iyo fikradaha macaamiisha. ”
Waxaan rajeyneynaa in dhammaan kaqeybgalayaasha cilmi baarista ay xoogaa dhejin doonaan qoraalka, sababtoo ah natiijooyinka baaritaanka haramaha horey ayaa loo sii qorsheeyay. Tijaabada waa inuu fashilmay. Kaliya ma aha tijaabinta, laakiin sidoo kale farriinta dowladda ee ku saabsan weedku waa caydha.
cannabisbeerista cannabisdembigo'aan qaadashocaafimaadkaxagashaKHLAsharci-dejintaNederlandbaaritaanka weedbeerista cannabis
Orodyahanka cusub ee sareeya? 80% dadka isticmaala xashiishka waxay isku daraan xashiishka jimicsigooda
Sideed ka mid ah XNUMX isticmaaleyaasha marijuana ee waddamada xashiishku sharci ka yahay waxay yiraahdaan wax yar baa ka horreeya ...
Miyuu khamriga bilaashka ah ee khamriga leh ee cannabis u noqonaya hype ee 2019?
Biirku waa kulul yahay, waan wada ognahay taas. Beersareyaashu waxay sameeyaan wax kasta oo ay awoodaan si ay u abuuraan beero galiya oo dhadhan fiican leh ...